Maareeyayaasha İETT waxay dhegeysteen dhibaatada Darawalada Basaska Gaarka ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaamulayaasha IETT ayaa dhagaystay dhibaatada darawalada basaska dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay
04 / 12 / 2019 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
Maamulayaasha iett waxay dhageysteen dhibaatooyinka basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay
Kulankii ugu horreeyay ee maareeyayaasha IETT iyo wadayaasha ka shaqeeya Baska Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay waxaa lagu qabtay IETT Kagithane Garage. Darawalka 100 wuxuu sharxay dhibaatooyinka darawalka iyo maamulayaasha IETT waxay qaateen qoraallo.
Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay waa maaddooyinka inta badan la soo dacweeyay ee ku saabsan gaadiidka dadweynaha ee Istanbul. Laga soo bilaabo tayada gawaarida ilaa nadaafadda, dharka ilaa aragtida aragtida darawalka si loo helo cabashooyin badan oo ku saabsan Baska Dadweynaha (ÖHÖ) ayaa kor u qaaday gacmaha IETT.
Amarada Duqa Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, ayaa ugu horeyn dhagayso dhibaatooyinka cabashada markii ugu horeysay, waxaana go, aanka lagu gaadhay in la abaabulo shilalka darawalada.
Kulamadii ugu horreeyay ee kulamadan waxaa lagu qabtay IETT Kağıthane Facilities. Maamulayaasha IETT iyo 100 driverHO darawal oo isugu yimid hoolka shirarka ayaa isweydaarsaday aragtiyo. Madaxa Waaxda Gaadiidka IETT Erol Ayartepe, oo ka bilaabaya khudbadda furitaanka, ayaa ra'yigooda ka dhiibtay iyagoo mikrofoonka hal mar wada qaadanaya.
Dacwooyinka mudnaanta leh ee darawalada waxay ahaayeen rakaabka aan laheyn kaararka. Si taxaddar leh u isticmaalidda kaarka qof kale, kaarka waa in loo helaa hab sahlan oo lagu kansali karo, muwaadinku iyo wadaha waa inaysan waji ka hor imaan ”
Darawalada Basaska Gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay ayaa sheegay in wacyi gelinta dadweynaha ee rakaabku ay tahay in lagu hubiyo filimada xayeysiinta ee loo diyaar garoobayo. Baabuur ayaa yidhi, Waxaan haysannaa rakaab raba inay ka baxaan albaabka hore oo ka baxaan albaabka hore.
Mid ka mid ah qodobbada ay soo saareen darawalada ayaa ahaa in muwaadiniintu ka cawdeen Khadka Alo 153 marar badan. Cabashooyinka ka dhashay tirada badan ee ganaaxyada loo qoray iyaga oo ka cabanaya darawalada, cabashooyinka, sida sawirada ama caddeynta fiidiyowga waa in la codsadaa, ayuu yidhi.
Darawal kale ayaa yidhi, minib Darawalka baska yar, ee doonaya inaan dhawaaqo ka dhawaajiyo oo aan ka tago saldhiga, wuu iga cawdaa anigoo wacaya Alo 153 hortayda inta rakaabku ay fuulaan baska.
Kulankan, oo socday inka badan laba saacadood, darawalada ayaa lasiiyay su’aalo ah inaysan qori doonin magacyadooda. Shuruudaha lagu sheegay kulammada iyo jawaabaha su'aalaha faahfaahsan ee sahanka waxaa lagu soo uruurin doonaa warbixin. Iyadoo la raacayo warbixintan, IETT waxay cadeyn doontaa talaabooyinka la qaadayo si loo hagaajiyo Gawaarida Gaarka ah ee Dadweynaha.
Kulamada lala yeelanayo wadayaasha ayaa lagu celcelinayaa waqtiyo isdaba joog ah, iyada oo la siinayo fursad ay ku sharxaan dhibaatooyinka wadayaasha Gawaarida Gaarka ah ee Dadweynaha iyo in ay gudbiyaan baahida muwaadiniinta.
Dhibaatooyinka taraafikada iyo roogga ee Istanbul ayaa xalin doona!